Sarkaal La Dilay Iyo Dagaal Ka Dhacay Muqdisho. – Calamada.com
Sarkaal La Dilay Iyo Dagaal Ka Dhacay Muqdisho.
calamada July 16, 2018 2 min read
Howlgaladan oo isugu jira dil iyo dagaal toos ah waxey ciidamada Mujaahidiinta ka fuliyeen degmooyinka Hilwaa iyo Madiina ee magaalada Muqdisho.
Howlgalka Kowaad oo ah mid dil ah waxey ciidamada Mujaahidiinta ka fuliyeen qeybo ka mid ah degmada Hilwaa waxeyna ku beegsadeen sarkaal sare oo ka tirsan waxa logu yeero Milatariga kooxda Ridada Somalia.
Sarkaalkan Murtadka ah ee la khaarijiyay ayaa lagu magacaabi jiray Salaad Tariina kaasi oo ahaa mid ku caan ahaa dhibaateynta dadka shacabka,waxeyna ciidamada Mujaahidiinta ee dilkan geystay horay usii qaniimeysteen qorigii uu ku hubeysnaay sarkaalkaasi.
Howlgalka Labaad oo ahaa mid dagaal toos ah waxey ciidamada Mujaahidiinta ku qaadeen fariisin maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka sameysteen xaruntii hore Sifeynta Batroolka ee xaafada Madiina.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa dhowr jiha ka weeraray fariisinka,iyadoona dhawaaqa rasaasta ay is weydaarsanayeen xaqqa iyo baadilka si aad ah looga maqlayay qeybo badan oo ka mid ah gudaha iyo duleedka Muqdisho.
Maleeshiyaatka Murtadiinta ayaa dagaalkan lagu gaarsiiyay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed,waxeyna howlgaladan kusoo aadayaan xilli ciidamada Mujaahidiinta ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah Kufaarta iyo Murtadiinta isu soo baheystay la dagaalanka Diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta.
Isbuucyadii lasoo dhaafay ayaa ciidamada Mujaahidiinta ee ka halgama gudaha Caasimada Muqdisho waxay si dardar leh ku wadeen weeraro jab xooggan lagu gaarsiiyay Murtadiinta. Waxaana weeraradaas oo kuwoodii ugu muhiimsanaa lagu beegsaday wasaaradaha arimaha gudaha, tan amniga iyo xarunta Madaxtooyada ay sababeen dhimashada in ka badan 50 isugu jira saraakiil iyo maleeshiyaat.
Xuquuqda Warbixinta Waxaa Iska Leh Radio Andalus.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 04-11-1439 Hijri.
Next: Dhageyso Wareysiga Mujaahidkii Camaliyadda Istish-haadiyada Ku Daahfuray Weerarkii SYL Iyo Madaxtooyada.